The la ballaariyey barnaamijka Cimilada & Tamarta Midwest iyo soo bixitaanku barnaamijku wuxuu diiradda saaray beelaha sinnaanta wuxuu ku dhawaaqi doonaa tilmaamaha cusub deyrta 2020. Deeq bixiyayaashu waxay xaq u yeelan doonaan inay ku dabaqaan labadan barnaamijba haddii ay ku habboon yihiin tilmaamaha cusub.
Ku dhawaad 30 sano, McKnight wuxuu u heellan yahay ilaalinta iyo soo celinta Webiga Mississippi.
Dib u dhiska ayaa xaqiijinaya in Mississippi ay sii wadi doonto taageerada noolaha kala duwan ee noolaha, nolosha dhaqanka American, iyo nolol dhaqaale sanadaha soo socda. Inkasta oo arrimo badani ay saameyn ku yeeshaan adkaynta wabiga, waxaynu diirada saarnaa laba qaybood oo waaweyn:
beeraha, inta badana waa la nadiifiyaa sida nitrogen, fosfooraska, iyo dhoobada
beddelidda qaababka dheecaanka iyo hydrology dabiici ah ee Wabiga Wabiga Mississippi
Hydrology Dabiiciga ah
Yaree beeraha beeraha ee Wabiga Upper Mississippi.
Nitrogar iyo Fosfooraska waxay galaan Wabiga Mississippi meelo kala duwan, oo ay ku jiraan dhirta biyaha lagu buufiyo, xoolaha xoolaha, iyo kiimikada cagaaran. Ilaha ugu weyn waa bacrimin laga sameeyo dalagyada beeraha. Bacriminta waxay gacan ka geysan kartaa kobaca algae waxaana mararka qaar biyaha ka buuxiyaa oksijiinka ku filan. Biyaha dhadhanka ah, fosfooraska inta badan waa nafaqada taasoo keenta koritaanka algal ee balliyada iyo harooyinka, bedelida bayoolajiyada biyaha iyo mararka qaarkood xitaa khatar gelineysa caafimaadka. Goobta cusbada ee Gacanka Mexico, nitrogen waa tan ugu horreysa ee kor u kaca algae iyo heerarka oksijiinka oo hooseeya.
Adiga oo ku cabaya ogsijiin ku jirta biyaha, algae waxay ubaxday kalluunka waxyeellada kiciya iyo duur kale. Gacanka, ubaxyada ayaa waxay gacan ka geystaan duruufta xilliyeed ee "dilaaga ah", "burburinta degaannada badda. Heerarka sare ee Nitrates waxay sidoo kale halis u yihiin bani-aadmiga, waxayna kobciyeen waxqabadyo daaweyneed oo kharash badan oo biyo ah oo ku yaalla bulshooyin dhowr ah oo ku yaal wabiga Mississippi.
Minnesota, Wisconsin, Iowa, iyo Illinois, waxaan ku dadaaleynaa sidii aan u kobcin lahayn dalagyada badeecadaha si joogto ah, iyo sidoo kale mashaariicda taageeraya nidaamyo kala duwan oo kala duwan.
Dhaqaalaheena, waxaanu xoogga saari doonaa hababka soo socda ee soo socda:
dhiirigaliso suuqyada cusub ee badeecadaha waarasida Kernza®, hadhuudh ciidan ah) iyada oo la dhisayo baahida macaamiisha iyo horumarinta hal-abuurka is-xakamaynta cuntada ilaa munaasabadan dalbashada baahida macaamiisha ay ku wadi karto dhaqanka beeraha
dhisaan wacyiga dadweynaha ee xiriirka ka dhexeeya beeraha iyo tayada biyaha
kor u qaadista wacyiga iyo aqbalaadda dhaqanka joogtada ah ee beeralayda, iyo dhisidda awooda lagu fulinayo dhaqannadaas (sida xoolaha daaqsinka leh, daboolaya beeritaanka, beeraha saxda ah, iyo cirifka dufanka leh)
u ololeeyaan isbeddel siyaasadeed kaas oo kor u qaadi doona soo-celinta dhaqaalaha iyo in la yareeyo halista dhaqangelinta hababka beeraha ee waara
ballaadhiyaan baaxadda isbahaysiga ee ka shaqeynaya bedelaadaha waara
farsameeyaan tiknoolajiyada cusub ee hagaajiya xayawaanka ciidda iyo maareynta socodka
Dib u soo celi hawsha qoyaanka hawada ee Mississippi.
Biyaha wareega ama hydrology-ka Mississippi biyaha ayaa la baddalay by qarniyo isbedel ah ee dhulka, gaar ahaan ka lumay dhulalka qoyaanka si ay u sameeyaan habka beeraha. Wareegga biyaha ayaa sidoo kale saameeyey sida ugu dhakhsaha badan ee nidaamyada biyaha laga dhaliyo ee biyaha ka baxa beeraha beeraha, iyo sida qashin-qubka, biyo-socodka, iyo wabiyada ay u guuraan biyahaas ka sii fog. Hydrology wax laga baddalay ma aha oo kaliya daadadku waxay ka sii daraysaa daadadku, waxay sidoo kale hoos u dhigtaa awoodda dabiiciga ah ee hawada ah si ay u soo saaraan oo u nuugaan wasakhaha. Horumarinta joogtada ah ee dhulka beeraha iyo isticmaalka miyiga ayaa hoos u dhigay daadadka, taas oo xaddidaysa awoodda webiga ee lagu xaddidayo wasaqda iyo yaraynta socodka feejignaanta.
Dhamaan webiga Upper Mississippi iyo berriga, waxaan maalgelineynaa dadaalada dib u soo celinta daadadka iyo goobaha qoyaanka, maareeyaan biyaha bullaacadaha, iyo in la balaariyo dhaqdhaqaaqyada beeraha waara.
Waxaan xoogga saarnaa hababka soo socda ee soo socda:
kobcinta xalal cusub oo la xidhiidha dheecaanka beeraha iyo lumitaanka hydrology dabiiciga ah
mudnaanta hababka dabiiciga ah ee kantaroolka daadadka (sida ilaalinta dhulalka qoyaanka iyo daadadka) iyo maaraynta webka isticmaalka badan
horumarinta fursado lagu kobcinayo waxtarka dhaqaale iyo madaddaalada ee laga helo dhulalka qoyaanka iyo daadadka
isu keena ururada ilaalinta ee leh xulafada aan caadiga ahayn si loo horumariyo xalal cusub
In la kobciyo taageero dadweyne oo baahsan oo biyo nadiif ah iyo siyaasado ilaaliya ilaha biyaha
Dhaqaalaha iyo Bulshada
Samaynta isbedelka miisaanka Nidaamka Mississippi River waa mid adag. Go'aamada maalin kasta ah ee malaayiin qof ayaa saameeya sida dhulka loo isticmaalo iyo sida biyaha u dhex maro dhulka.
Waxaan dooneynaa inaan bedelno dhaqaale, bulsho, iyo dhaqanno dhaqameed oo saameeya doorashooyinkan. Meelahaas ayaa danta gaar ah leh:
Isticmaalka suuqyada si loo sii wado waaraajin sii ballaadhan ee silsiladaha sahayda beeraha
heerka dhaqanka beeraha ee joogtada ah
Waxaan sidoo kale kor u qaadnaa alaabooyinka, farsamooyinka, iyo teknooloojiyada kuwaas oo yareeya socodka iyo dib u soo celinta hawlaha dabiiciga ah. Waxaan taageernaa waxyaabahan soo socda:
xiisaha macaamiisha ee dhaqanka beeraha waara.
qaadashada dalagyada iyo dhaqanka beeraha ee ilaaliya ciidda iyo biyaha.
Dhiirrigelinta xiisaha caafimaadka carrada
teknooloojiyada si loo isticmaalo waaritaan badan oo dhul ah
Waxaan ugu horreyn diirada saari doonaa xaaladaha muhiimka ah ee Wabiga Upper Mississippi, qaab-dhiska iyo nidaamka webiga ee si aad ah loo badelay 200-kii sano ee la soo dhaafay. Waxaannu maalgelinaynaa dadaalka aan ku soo celinayno hydrology-ka hawleedka wabiga wabiga iyo hoos u dhigista wasaqda beeraha ee Minnesota, Wisconsin, Iowa, iyo Illinois. McKnight sidoo kale wuxuu taageerayaa dadaallada lagu xallinayo khasaaraha dhul xeebeedka iyo dhibaatooyinka deegaanka ee la xidhiidha aagga Mississippi ee kuyaala Louisiana. Waxaan bixinnaa taageero kooban oo ku saabsan arrimaha biyaha ee qaranka oo saameyn weyn ku leh Wabiga Mississippi.
Nidaamkayagu wuxuu xoojinayaa waxyaabahan soo socda:
hal-abuur si loo horumariyo wax soo saarka beeraha iyo farsamooyinka cusub, iyo sidoo kale habab cusub oo loo ilaaliyo ilaalinta.
miisaanka iyo cabirka si loo gaaro saameyn nidaamsan.
imtixaanka iyo barashada si loo xaliyo xalalka waqtiga.
dhisidda awooda si loo suurtageliyo u doodayaasha inay soo saaraan talooyin siyaasadeed oo cusub.
Ka mid noqoshada iyo sinnaanta si loo hubiyo in dhammaan bulshooyinka ku yaal Mississippi ay leeyihiin fursado ay ku qeexaan waxa ka mid ah jilicsanaanta Mississippi macnaheedu waa iyaga, iyada oo aan loo eegin juqraafi, dakhliga, jinsiga, ama qowmiyadda. Sinaanta ayaa xaqiijinaysa in dhammaan bulshooyinku ay ka faa'iideystaan nidaam caafimaad oo wanaagsan.
Tusaalaheena macquulka ah waa khariidad wax ku ool ah oo ka socota labada xeeladaheena, iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa badan ee barnaamijkeena, iyo ugu dambeyntii natiijooyinka aan ku dadaalno in aan gaarno.
Marka laga soo tago deeq-bixinta, barnaamijkeenu wuxuu taageersan yahay kulannada, shaqada siyaasadda, cilmi baarista, iyo dhisidda xiriirka.
Xarumaha Isbedelka ee barnaamijka Mississippi River ee xarumaha isbeddelka ee dhiirigelinta u qaadaya go'aamada saamaynaya wabiga.
Nidaamkeenu wuxuu ku salaysan yahay faham ah in isbeddelka muddada dheer uu ku tiirsan yahay goobo xasaasi ah: Sida dhaqanka cusub iyo alaabooyinka la qaato, waxay bilaabaan inay bedelaan suuqyada, siyaasadda, iyo caadooyinka dhaqanka. Wakhti ka dib, isbeddeladani waxay bixiyaan dhiirigelin aad u xoogan si ay u qabtaan dhaqanka cusub.
Jihaynta is-xoojinta waxay keenaysaa dhaq-dhaqameed cusub miisaanka loo baahan yahay si loo hagaajiyo tayada iyo adkeysiga nidaamka River Mississippi. Tani waxay ugu dambeyntii u noqon kartaa dhaqdhaqaaq caadi ah.
Faylalka waxqabadka la xaqiijiyay. Waxaan raadineynaa oo dhiirigelinaynaa ansaxinta dhaqamada oo yareeya saamaynta webiga iyo dib u soo celinta shaqadeeda. Tilmaamida karti-gelinta manhajkan soo-baxaya waxay ka caawisaa in laga gudbo halista khatarta dabiiciga ah ee dadku u qabo alaabooyinka iyo dhaqanka cusub. Waxay sidoo kale ku dhiirigalineysaa in la sii wado.
Hirgeli suuqyada iyo siyaasadda. Shakhsiyaadka iyo hay'adaha go'aanadooda iyo dabeecadoodu ay saameeyaan Wabiga Mississippi ayaa si aad ah u saameynaya suuqyada iyo siyaasadaha dawlada. Waxaan dooneynaa inaan abuurno fursado suuq cusub iyo dhiirigelin siyaasadeed oo dhiirigeliya ansaxinta alaabta iyo dhaqamada aan qiimaha lahayn.
Xooga saar dhiirigelinta. Isbeddelka dhiirigelinta waqti ka dib wuxuu ku tiirsan yahay goobo xasaasi ah. Waxaan diirada saarnaa dib u soo celinta dhaqaalaha, halista, shuruudaha sharciyeynta, dhaqanka, iyo qiyamka jaaliyada ee dejiya go'aaminta saameynta webiga.
Marka suuqyada cusubi qaan gaadhaan oo noqdaan kuwo la saadaalin karo, khataraha ayaa noqda kuwo si fiican loo fahmo. Suuqyada iyo siyaasadaha waxay la qabsadaan si ay u maareeyaan khatartaas. Qawaani cusub ayaa hela aqbalaada waxqabadka caadiga ah. Shirkadaha iyo ururrada waxay aqbalaan siyaabaha cusub ee ganacsiga, iyo bulshooyinku waxay filayaan in la filayo dhaqamada soo baxaya. Kuwani waa duruufaha muddada fog ee Mashruuca Beddelka.
Natiijooyinka. Maaddaama beeraha cusub iyo dhaqdhaqaaqyada dhuleed ee la qaato miisaanka, culeyska nafaqada ee qulqulka beeraha ayaa la yareeyey, isbeddelka nidaamyada dheecaanka ah ee ilaaliya dhulalka qoyan, iyo hawsha biyaha hawada ee dabiiciga ah ayaa la soo celiyaa.
Saameynta isugeyntu waxa ay hagaajisay tayada biyaha iyo adkeysiga nidaamka webiyada sida weyn iyo kakan sida Mississippi.